Ny tombony azo amin'ny fiainana alika mandritra ny fitondrana vohoka | Tontolo alika
Rachel Sanchez | | Alika ankapobeny
Am-polony taona vitsivitsy lasa izay, mpivady maro no nanapa-kevitra ny hiala amin'ny biby fiompy rehefa manantena a Bebe. Ary na dia manondro aza ny manam-pahaizana amin'izao fotoana izao fa ny fiainana miaraka amin'ny biby dia tsy tokony hanimba ny fitondrana vohoka, mbola misy ireo izay mino hafa. Tsy misy zavatra mety ho lavitra amin'ny fahamarinana; Asehon'ny fanadihadiana fa ny alika dia mitondra tombony lehibe ho an'ny vehivavy mandritra izany ny vohoka.
Anisan'izy ireo ny tetikasa navoakan'ny magazine Plos One tamin'ny 2012, izay nataon'ny mpahay siansa avy ao amin'ny Liverpool University (UK). Fehiny: ny vehivavy bevohoka miaina amina alika iray na maromaro dia manao hetsika ara-batana bebe kokoa, zavatra mahasoa ny toe-batana sy ara-psikolojika ny reny sy ny zaza. Ny tsy fisian'ny fanatanjahan-tena, ny mifanohitra amin'izany dia mety hiteraka olana toy ny hatavezina na fahasarotana amin'ny fivezivezena ra.
Ny fizarana ny tranontsika amin'ireo biby ireo dia manery antsika handeha matetika kokoa, zavatra iray izay mahasoa antsika koa mandritra ny fotoana fiterahana. "Manampy amin'ny fanatontosana ny fanaovana asa ara-batana 150 minitra isan-kerinandro izay atolotra antonony mandritra ny fitondrana vohoka izy ireo," hoy ny fanazavan'ny dokotera. Carri Westgarth, mpandray anjara amin'ny fianarana. "Na dia efa naseho aza ny alika mba hampitombo ny fampihetseham-batana amin'ny olon-dehibe amin'ny ankapobeny, dia ity no fanadihadiana voalohany nanombanana ity fifandraisana amin'ny vehivavy bevohoka ity," hoy ihany izy.
Ity fandinihana ity dia natao tamin'ny alàlan'ny famakafakana vehivavy bevohoka 11.000, ka ireo izay nanana alika ho biby dia 50% no mety hampihatra ilay Recommended habetsahan'ny fanatanjahan-tena amin'ity fanjakana ity, tokony ho 30 minitra isan'andro. Ho fanampin'izany, ny famakafakana dia nanapa-kevitra fa ny tompon'ny karazana lehibe dia mandeha amin'ny haingam-pandeha mamiratra kokoa noho ireo mandeha alika kely.
Tsy ny mandeha an-tongotra ihany no ifandraisany amin'ireo biby fiompy ireo fa mahasoa ny vehivavy bevohoka. ny Fotoana mahafaly ny hoe miaina eo akaikiny isika dia manampy antsika hamoaka endorphins, hanafainganana ny metabolisma ary hamorona andian-dahatsoratra simika mahasoa ho an'ny vatana. Ho fanampin'izany, mampiroborobo toe-tsaina tsara izy ireo izay misy fiantraikany tsara amin'ny fivelaran'ny zaza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Ny tombony azo amin'ny fiainana alika mandritra ny fitondrana vohoka